Ch 14 Matthew – 2kalluunka
Home / Kitaabka Quduuska ah / Injiilka Matthew / Ch 14 Matthew
14:1 Oo wakhtigaas waxaa, Herod the Tetrarch heard the news about Jesus.
14:2 Oo isna wuxuu addoommadiisii ​​ku yidhi: “This is John the Baptist. He has risen from the dead, and that is why miracles are at work in him.”
14:3 For Herod had apprehended John, and bound him, and put him in prison, Herodiya aawadeed, the wife of his brother.
14:6 Markaasuu, on Herod’s birthday, the daughter of Herodias danced in their midst, and it pleased Herod.
14:8 Laakiin, having been advised by her mother, ayay tidhi, “Give me here, on a platter, the head of John the Baptist.”
14:9 Markaasaa boqorkii aad u xumaatey. Laakiin sababta oo ah dhaarihiisii, and because of those who sat at table with him, he ordered it to be given.
14:13 Ciise markuu taas maqlay, ayuu halkaas ka tegey doon, oo meel cidla ah nafsaddiisa. Dadkii badnaa goortay maqleen waxaa ka mid ah, wayna raaceen on magaalooyinka lug kaga soo.
14:14 Oo socda, ayuu dad badan arkay, oo wuxuu soo waday naxaan iyaga, oo wuu bogsiiyey kuwoodii bukay.
14:15 Oo markii makhribkii la gaaray, xertiisii ​​u soo dhawaaday, oo wuxuu ku yidhi: "Tani waa meel cidla ah, oo saacaddii ayaa hadda maray. Daa dadkii badnaa, si, by socda magaalooyinka, ay cunto ku iibsan karaan naftooda. "
14:16 Laakiin Ciise wuxuu ku yidhi: "Uma ay baahna inay tagaan. Sii wax iska cunaan. "
14:17 Waxay ugu jawaabeen, "Waxaan halkan ma haystaan, marka laga reebo shan kibsood iyo laba kalluun. "
14:18 Wuxuu iyaga ku yidhi, "Halkan iigu keena in."
14:19 Oo markuu dadkii badnaa ku amray inay cawska ku fadhiistaan, Isaguna wuxuu qaaday shantii kibsood iyo labadii kalluun,, iyo kor u fiirinaya xagga samada, ayuu barakeeyey oo kala jejebiyey, oo kibista xertiisii ​​siiyey,, ka dibna xertiina dadkii badnaa ayay si.
14:20 Dhammaantood way wada cuneen oo dhergeen. Kolkaasay waxay qaadeen haraadiga ah: laba iyo toban dambiilood oo ka buuxa jajabkii.
14:21 Hadda tirada Kuwii cunayna waxay ahayd shan kun oo nin, haweenka iyo carruurtu ku jirin.
14:22 Markaasaa Ciise xertiisii ​​isla markiiba inay fuulaan doonni qasbi, iyo inay isaga hor in gudbaya badda, intuu dadkii badnaa dirayo.
14:23 Oo markay dadkii badnaa diray, isaguna keligiis ayuu kor u buur fuulay inuu ku tukado. Goortii makhribkii gaaray, keli ahaantiis ayuu halkaas ahaa.
14:24 Laakiin oo badda dhexdeeda ah, doonnidiina ayaa ka fogaatay oo hirarku ku saabsan. Waayo, dabaysha ayaa ka gees ahayd.
14:25 Markaasuu, Wakhtiga gaadhkii afraad oo habeenka, ayuu u yimid, badda ku dul socda.
14:26 Oo wuxuu arkay isagoo socda oo badda, waxay dhibtay, oo wuxuu ku yidhi: "Waxa ay noqon waa muuqad." Oo waxay ku qayliyeen, maxaa yeelay, waxaan ka cabsadaa.
14:27 Kolkiiba, Ciise ayaa iyaga la hadlay, oo wuxuu ku yidhi: "Rumaysta. Waa waxaan. Ha ka baqin."
14:28 Markaas Butros ayaa u jawaabay oo wuxuu ku yidhi, "Lord, haddaad tahay adiga, dalban ii soo kiin biyaha korkooda ku iman. "
14:29 Oo isna wuxuu yidhi, "Kaalay." Markaasaa Butros, doonnida ka soo degaya, biyaha badan socday, si ay u inuu Ciise u tago.
14:30 Oo weliba sida runta ah, maxaa yeelay, dabaysha ayaa ka xoog badan ahaa, wuu ka baqay. Oo intuu bilaabay inuu dego, ayuu qayliyey, oo wuxuu ku yidhi: "Lord, Ibad baadi."
14:31 Oo markiiba Ciise gacantiisuu u kordhiyay oo qabtay oo ka mid ah. Oo isna wuxuu ku yidhi isagii, "Yar O iimaanka, maxaad u shakiday?"
14:32 Oo kolkii ay kor u doonni fuulay, dabayshu waa joogsatay.
14:33 Markaasaa kuwii doonnida soo dhowaadeen oo isaga caabuday, oo wuxuu ku yidhi: "Runtii,, waxaad tahay Wiilka Ilaah. "